Home Wararka Dowladda ‘Somaliland” oo Diiday Bannaabax ay ku Baaqeen Xisbiga Wadani Kana xertay...
Dowladda ‘Somaliland” oo Diiday Bannaabax ay ku Baaqeen Xisbiga Wadani Kana xertay Sarkaal Sare.
War aynu iminka ka hellay Magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in Xabsiga la dhigay xogahaya Xisbiga waddani. Ciidamadda Booliska Hargeysa ayaa Xeray Xoghayaha Guud ee Xisbiga Waddani Khadar Abdi. Waraka waxay sheegayaan inay Xarigga khadar loo aaneynayo bannaanbax berrito looga dhawaaqay Hargeysa oo uu ku baaqay gudoomiyaha Xisbiga Wadani.
Xisbiga waddani waxaa uu aad uga soo horjeestay guddiga doorashooyinka Qaran ee Somaailand, waxayna ku eedeeyeen in MW Muusa biixi uu si cad ugu tumanayo xeerarka u yaalla Somailand.
Haddaba maalinta berri ah ayuu ku baaqay guddoomiyaha Xisbigaas Waddani Cabduraxman Cirro bannanbax ka dhaca Gobolka Hargeysa. Wararka waxay sheegayaan in taliyaha boliiska uu diiday isagana diiday bannaanbaxaas oo uu ku tilmaamay sharcidarro.
Waxaa beryahaanba soo baxayey Somaliland iskudhac siyaasadeed oo u muuqda inuu hadda faraha ka baxayo. Cirro waxaa u ku eedey MW Biixi inuu kala qeybinayo bulshada reer Somaliland oo xisbigooda lagu eedeynayo inuu Somali weyn u xaglinayaan.
Cabdiraxmaan waxaa uu ku baaqay inay taagarayaashiisu isugu yimaadaan xaruunta xisbiga berito 8 aroornimo si loogu sheego arrimo muhiim ah. Hasa yeeshee dowlada Muse Biixi ayaa ka cabsi qabta inuu noqdo bannaanbax wax ka badala siyaasadda adadag ee Muuse Iyo Xisbigiisa ku maamulaan Somaliland xelligaan.
Xeritaanka xoghayaha guud ee Xisbiga Khadar Abdi oo ka mid yhakhsiyaadka ugu firfircoon xisbigaas iyo Joojinta mudahaaraadka waxay abuuri kartaa inuu isku dhac yimaado waana cabsida caawa dad badan oo reer Hargeysa ah ay qabaan.